Hosoka avo lenta eto an-drenivohitra :: Trano iray feno fitaovana fanamboarana vola sandoka • AoRaha
Hosoka avo lenta eto an-drenivohitra Trano iray feno fitaovana fanamboarana vola sandoka
Ravan’ny Zandarimaria eny Andoharanofotsy ny trano iray fanamboarana vola sandoka, afak’omaly. Ankoatra ireo olona dimy voarohirohy ho mpanamboatra sy mpanaparitaka ireo vola sandoka dia nahitana fitaovana marobe isan-karazany tao amin’io toerana, teny Volotara-Andoharanofotsy io.
Niainga tamin’ny fisamborana olona roa nitondra vola roa alina ariary miisa telo teny Ambohibao-Bongatsara, tamin’ny alahady hariva, ny fahatrarana ireo mpanao hosoka, araka ny loharanom-baovao akaiky ny mpanao famotorana. Nohadihadiana teny amin’ny Zandarimaria eny Andoharanofotsy izy ireo. Tamin’izany no nahafantarana fa: “tsy mahita ny tranon’ny olona nanome ny vola sandoka ry zareo. Nilaza ho nahalala ny toerana mety ahitana an’io atidoha io kosa anefa izy ireo”, hoy hatrany ny loharanom-baovao.
Niroso tamin’ny fikarohana ilay olona voatondro ho atidoha teny amin’ny toeram-piantsonan’ny taksibe, teny Andoharanofotsy, ireo mpanao famotorana sy ny olona nahatrarana ireo vola, afak’omaly. Hita teo tokoa io lehilahy voatondro io.
“Narahinay ny diany hatrany an-tranony. Nosavaina avy hatrany ny trano rehefa hita. Teo no nahasaronana an’ireo fitaovana, toy ny tapaka vola roa alina ariary marobe efa ho antsasaky ny baoritra, firavaka plastika fanao amin’ny tanana miisa folo fonosana, arovava miisa sivy, arotanana miisa roapolo, taratasy fotsy miisa fito amby sivifolo, vovo-javatra mavomavo tao anaty plastika milanja 150 grama, vola roa alina ariary tena izy miisa iraika amby telopolo,vola iray alina ariary tena izy miisa iraika amby roapolo sy fanapahana biriky iray”, hoy hatrany ny loharanom-baovao.
Vita omaly ny famotorana an’ireo olona miisa dimy voampanga ho mpanao vola sandoka sy mpanaparitaka izany. Raha tsy misy ny fiovana dia hatolotra ny Fitsarana eny Anosy, anio, izy ireo.
Fahitana taolana tetsy Namontana :: Karan-doha iray teny ambony tsikafona